Microsoft Corporation kwupụtara ọkwa igwe ojii ọhụrụ maka portal azure | Ọ BỤ
Microsoft Corporation na-akwado nkwado igwe ojii ọhụrụ maka ọnụ ụzọ Azure
Ụlọ ọrụ Microsoft na-ekwupụta na igwe ojii ọhụrụ ga-emesi ike maka azịza Azure
Ngwuru ojii bara uru na-eso ụzọ abụọ. E nwere ma ọ bụ igwe eletriki na kọmputa ma ọ bụ interface ọnụ akara. Dị ka iwu ndị ahịa na-agba ma ma na-agbanwe n'etiti ha pụtara ịtụgharị n'etiti ngwa na ọnụ ala, na n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya.
Dị ka ihe ntanetị kachasị ọhụrụ site n'aka Microsoft gosipụtara, ngwaahịa goliath echewo azịza ya.
Ngwuputa Microsoft Azure Microsoft ọhụrụ na-esonyere usoro oru nhazi, nke na-enye ndi ahịa ohere imeputa ngwa n'oru Azure iji nyochaa ihe ngosi ma obu buo usoro ihe. A na-abanye shea n'ime ọnụ ụzọ ahụ ka ndị ahịa nwee ike ịbanye ngwa ngwa na ntinye akara, ma n'otu oge ahụ ịhụ igwe ojii ha na njikwa weebụ.
Nke a na-eme ka isi okwu ahụ dị n'elu ma nye ndị ahịa ohere iji rụọ ọrụ na ngwa dị ka nhazi ma ọ bụ mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ebe ọhụụ ebe a na-ebuteghị akara ụda.
Nke a na-eme ka ịmepụta koodu dị mfe ebe ọ na-enweghị mgbanwe ọ gụnyere.
Akụkụ dị mkpa nke ahụmahụ a bụ:
Ngosipụta nkwenye na usoro akara n'usoro ntanetị gị ugbu a
All Azure na-akwụ ụgwọ ngwa apparatuses, nakwa ihe ndị dị ịrịba ama na-emepụta uru akara
Haziri ahazi, Wọkspeesi na-arụ ọrụ mgbe nile na jelii gị koodu, imepụta na ijegharị na-agafe na ọkpụkpụ igwe.
"Ọnụahịa ahụ bụ nkwupụta zuru ezu mesiri ya gụnyere ngwa ngwaọrụ ụgwọ azure, yana ndị editọ na ọkọlọtọ ndị ị ga-atụ anya. Na-akwalite, ígwé ígwé ojii na-edozi gị, "ka Brendan Burns, Onye Mmekọrịta Onye Mmekọ nọ na blog ahụ dere. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndekọ edere na efere na-anọgide n'igwe ojii Azure ka ndị ahịa wee nwee ike ịga n'ihu ebe ha kpochapụrụ na nnọkọ igwe ojii na-esonụ. N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị ahịa achọghị ka ha dịrị na ngwaọrụ yiri nke ahụ ma ọ bụ usoro iji gaa n'ihu.
Nnweta nke LinkedIn Microsoft Ịmalite Ọpụpụ Ọhụrụ Maka Ndị Mmadụ